Vondron'ireo 'Isshuukan Friends' Quotes izay azonao ampifandraisina - Hafa
Mitady teny nalaina ho sakaiza? Ireto teny nalaina avy amin'ny “Isshuukan Friends” ireto dia hanampy anao hifandray!
Isshuukan Friends (Herinandro Iray Namana) Teny nalaina nalaina tamin'ny endri-tsoratra:
Sakaiza Ishhuukan (namana iray herinandro) dia andiam-piainana andiany iray momba ny finamanana. Ary ny zava-misy mangatsiaka amin'ny fomba mety hitranga eo amin'ny ankizilahy sy ankizivavy.
Ity anime ity dia tsy manana ny lisitry ny fitanisana lava indrindra, fa kosa misy teny nalaina azonao takarina sy hifandraisanao ary hanalanao zavatra.
Ka noho io voalaza io - andao hanomboka.
Ishhuukan Friends Notsongaina hitanao:
1. Yuuki Hase Quotes
'Misy zavatra tsy tiako hadino… Fahatsiarovana ny fotoana laninao amin'ny namako. Fahatsiarovana ny fotoana laniny miaraka aminy irery. Fahatsiarovana no zava-dehibe. Saingy misy zavatra mbola manan-danja kokoa aza… Izay ny manohy manao fahatsiarovana. ' - Yuuki Hase
2. Shougo Kiryu Quotes
“Ie, raha hitako izy mitsiky irery rehefa mamaky an'ity dia mety hieritreritra aho fa mampatahotra. Saingy misy zavatra tsy mety amin'ny olona miresaka fako sy mihomehy ao ambadiky ny hafa koa. ' - Shougo Kiryuu
“Rehefa mifampiresaka amin'ny olona fotsiny ianao vao hahita namana, na hahalala raha mifanaraka ianareo.” - Shougo Kiryuu
“Izay olona miaraka amin'ny olona no safidiny. Ary tsy niraharaha firy momba ny tsaho aho. Raha tsy nanandrana ny hiresaka tamin'izy ireo ny tenako dia tsy ho fantatro… '- Shougo Kiryuu
3. Shiho Fujimiya Quotes
'Ny famerenana ny lasa mandrakizay dia tsy hamaha na inona na inona.' - Shiho Fujimiya
“Ny matematika dia toy ny ankamantatra na lalao. Misy valiny mazava, ary handeha hitety azy ianao. Nefa misy fomba maro hahatratrarana izany valiny izany. Izany no mahafa-po tokoa rehefa hitanao ny vahaolana. Misy fomba hahitana valiny eo noho eo, na malalaka kokoa. Na ny fomba manodidina aza dia mety hitondra anao any amin'ny vahaolana voafaritra tsara. Mety tsy tsara tarehy io fomba io, fa rehefa marina ny valiny niasao mafy mba hahitana azy dia mahafaly anao izany. ” - Shiho Fujimiya
Loharano misy sary: Herinandron'ny namana herinandro iray
Karakter Anime 16 an'ny firaisana ara-nofo tsy manome olana momba ny tantaram-pitiavana